လာမယ့်လမှာ အယ်လ်ဘမ်သစ် ဖြန့်ချိမယ့် MAMAMOO အဖွဲ့ - Yangon Media Group
လာမယ့်လမှာ အယ်လ်ဘမ်သစ် ဖြန့်ချိမယ့် MAMAMOO အဖွဲ့
ကေကေပေါ့ပ် အမျိုးသမီးအဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် MAMAMOO သည် ၉ လအတွင်း ပထမဆုံး EP အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုကို ဖြန့်ချိတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့၏စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီက ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ RBW အေဂျင်စီက ” MAMAMOO အဖွဲ့ဟာ မတ် ၇ ရက် ညနေ ၆ နာရီမှာ အယ်လ်ဘမ်သစ်တစ်ချပ်ကို ဖြန့်ချိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လမှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ ပဉ္စမမြောက်အယ်လ်ဘမ် ‘Purple’ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်လာမှာပါ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အဖွဲ့သည် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် “Paint Me” အမည်ရှိ Single သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို ဖြန့်ချိခဲ့သေးသည်။ အဆိုပါသီချင်းသည် ပရိသတ်များနှင့်အတူ လှပ သော နှစ်သစ်တစ်ခုကို အတူတူ ဆေးရောင်ခြယ်ရန် ဆန္ဒရှိသည့်အကြောင်း ရေးသားစပ်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထွက်ပေါ်ခဲ့သော သတင်းများအရ ၎င်းတို့အဖွဲ့သည် ဂီတဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုလည်း မကြာသေးခင်ကပင် ရိုက်ကူးပြီး ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ” MAMAMOO အဖွဲ့ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်မှာ ဂီတဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကို ရိုက်ကူးဖို့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံကို ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုကို ဖြန့်ချိနိုင်ဖို့ အာရုံစိုက်ထားကြပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင် လေးဦးပါဝင်သော ၎င်းတို့အဖွဲ့သည် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဂီတလောကထဲသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး “Decalcomanie” သီချင်းဖြင့် နာမည်ကျော်ခဲ့သည့် အဖွဲ့လည်းဖြစ်သည်။
''ဇာတ်လမ်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုက မတူညီပေမယ့် အားထုတ်ကြိုးစားရတဲ့ အပိုင်းတွေကတော့ အတူတူပါပဲ'' ဒါရို??
"ကိုယ့်ရဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးက ပြန်လည်ပြီး ပထမဆုံး ဟာသဇာတ်ကားကို ရုံတင်ပြသမှာဖြစ်လို့ အရမ်းကို ရ?
မြန်မာ့ လယ်ယာ ထွက်ကုန်များကို နီပေါနိုင်ငံသို့ တရားဝင် တင်ပို့နိုင်ရန် (MoU) မူကြမ်း ပေးပို့ထ?
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် သစ်တောဝန်ကြီး နုတ်ထွက်ပေးရေး ဒေသခံများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်